Tag: saadaasha » Martech Zone
DataRobot: Madal Isbarasho Mashiinka Barashada Mashiinka
Talaado, Oktoobar 24, 2017 Talaado, Oktoobar 24, 2017 Douglas Karr
Waqtiga Akhrinta: 3 daqiiqo Sannado ka hor, waa inaan ku sameeyo falanqeyn maaliyadeed weyn shirkadayda si aan u saadaaliyo in mushahar kordhintu ay yareyn karto culeyska shaqaalaha, kharashaadka tababarka, wax soo saarka, iyo guud ahaan anshaxa shaqaalaha. Waxaan xasuustaa inaan ordo oo aan tijaabiyo moodooyin badan usbuucyo, dhammaantoodna waxaan ku soo gabagabeynayaa inay jiri laheyd keyd. Agaasimahaygu wuxuu ahaa nin layaableh wuxuuna iga codsaday inaan dib ugu noqdo oo aan iyaga u hubiyo mar kale ka hor intaanan go'aansan inaan mushahar ka jaro dhawr boqol oo shaqaale ah.
Waqtiga Akhrinta: 5 daqiiqo Waa akhrin xiiso leh Saadaasha Gartner ee 10ka teknoolojiyad ee ugu sarreeya 2011 for iyo sida ku dhowaad saadaal kasta ay saameyn ugu leedahay suuq geynta dijitaalka. Xitaa horumarka ku saabsan keydinta iyo qalabka ayaa saameyn ku yeelanaya awoodaha shirkadaha si ay ula falgalaan ama ula wadaagaan macluumaadka macaamiisha iyo rajooyinka si deg deg ah oo waxtar leh. Top Ten Technologies for 2011 Computing Cloud - Adeegyada xisaabinta daruuraha ayaa jira iyadoo laga dhex helayo muuqaalka dadweynaha furan iyo kuwa gaarka loo xiray. Saddexda sano ee soo socota ayaa la arki doonaa bixinta